Swim Out, manomboka anio ao amin'ny Mac App Store | Avy amin'ny mac aho
Androany ny zoma ary andro tsara kokoa handanianao fotoana hilalao eo alohan'ny Mac alohan'ny hahatongavan'ny faran'ny herinandro, ka tianay hizara aminareo rehetra ny lalao vaovao izay tonga tao amin'ny Mac App Store, Milomano, lalao miendrika piozila miaraka amina paikady mahaliana indrindra.
Amin'ity tranga ity dia hilalao hifandimby isika ary tsara ny tontolo iainana fampiharana, hialana sasatra isika rehefa miady hevitra amin'ny famaritana noho ny rano manga ao amin'ny dobo, ny atmosfera ary ny exoticism, fa tsy maintsy ho mitandrina ary aza mifanena amin'ny mpilomano hafa raha te-ho eny amoron-tsiraka isika ary hivelatra amin'ny seza misy ny lampihazo.
Swim Out dia nisy nandritra ny fotoana kelikely teo amin'ny sehatry ny iOS ary toy ny mahazatra tato ho ato dia natomboka volana maromaro taty aoriana ho an'ireo mpampiasa Mac. Handany antsika 5,99 euro, fa hanolotra fotoam-pifaliana mahafinaritra ho antsika izy io ary tsy mila miady mafy amin'ny fividianana fampiharana na zavatra hafa mitovy amin'izany isika, lalao feno io.
Ny sasany amin'ireo fiasa amin'ity lalao ity dia hahagaga antsika, toa ny mihoatra ny 100 ambaratonga misy ka tsy vitantsika mihitsy izany, ary toko maromaro izay ampiarahan'izy ireo: mpilomano 12 izay mihetsika irery: manomboka amin'ny mpilomano tratra ka hatrany amin'ny mpisitrika sahy amin'ny alàlan'ny ankizy manao baomba. Karazan-javatra 12 azo ampiasaina: vodiondry, palma, basy miparitaka ary koa kayak! ary karazana singa 6 voajanahary: ny onjan-drivotra, ny onja, ny foza na ny jellyfish izay ho avy hisorohana ny fikasanao hivoaka amin'ny rano!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Games » Swim Out dia manomboka amin'ny Mac App Store anio
Te hanakana ny Telegram ny governemanta rosiana raha tsy omenao azy ireo ny angon-drakitrao